Imigomo Yesevisi - Gamepron
Imigomo Yesevisi (“Imigomo”)
Kugcine ukubuyekezwa: Jan 5th, 2021
Sicela ufunde le Migomo Yensizakalo ("Imigomo", "Imigomo Yesevisi") ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa iwebhusayithi ye-https: //gamepron.com (i- "Service").
Ukufinyelela kwakho nokusetshenziswa kwe-Service kufakwe esimweni sokwamukelwa kwakho nokuhambisana nale migomo. Le migomo isebenza kubo bonke izivakashi, abasebenzisi nabanye abathola noma basebenzise isevisi.
Ngokufinyelela noma ukusebenzisa isevisi uyavuma ukuthi uboshiwe yiMigomo. Uma ungavumelani nanoma iyiphi ingxenye yemigomo khona-ke ngeke ukwazi ukufinyelela ku-Service.
Imibandela Nezimfuneko Ezijwayelekile
Kufanele unikeze ngemininingwane evumelekile edingekayo ukuqedela inqubo yokubhalisa.
Isevisi ngeke ibe nesibopho sokulahleka kwemininingwane, ukudalulwa kwemininingwane noma ukulimala okuyovela ngenxa yokungavikeleki kwephasiwedi ne-akhawunti yakho.
Akufanele wephule noma yimuphi umthetho noma wenze ukusetshenziswa okungagunyaziwe noma okungekho emthethweni ngenkathi, futhi usebenzisa, usebenzisa insiza.
Uzoba nesibopho sakho konke okuqukethwe nomsebenzi obanjwe ngaphansi kwe-akhawunti yakho.
Kufanele ube neminyaka eyi-15 noma ngaphezulu ukusebenzisa lolu hlelo.
Ukusekelwa kutholakala kuphela kubanikazi bama-akhawunti akhokhelayo ngokusebenzisa izinkundla zethu zewebhusayithi.
Ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo kusengcupheni yakho kuphela. Le sevisi ihlinzekwa ngesisekelo “njengoba sinjalo”.
Akufanele uthengise kabusha, ukopishe noma uphindaphinde insizakalo, noma enye ingxenye yayo, ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela ku-Service.
Igeyimu. ayiqinisekisi ukuthi le nsizakalo izophendula izidingo zakho, ngeke ibe namaphutha, izovikeleka noma izotholakala ngaso sonke isikhathi.
Isevisi inamalungelo ayo okususa, noma ukungasusi, noma yikuphi okuqukethwe okungekho emthethweni noma okucasulayo. Kodwa-ke, noma ikuphi ukuhlukunyezwa okubhalwe phansi noma usongo olwenziwe ku-akhawunti luzoholela ekuqedweni ngokushesha kwaleyo akhawunti.
Uyaqonda ngokucacile futhi uyavuma ukuthi Isevisi ngeke ibe nesibopho sanoma yikuphi ukulimala okuqondile noma okungaqondile, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kumonakalo wokulahleka kwedatha, inzuzo, noma okunye ukulahleka okungaphatheki okuvela ekusetshenzisweni okuqondile noma okungaqondile kwensizakalo.
Uyavuma ukubopha futhi ubambe okungenabungozi Isevisi nezinhlangano eziphethwe yizo, izikhulu, abenzeli, kanye nabasebenzi ekulahlekelweni noma ekulahlekelweni ukulahlekelwa noma kwezindleko ngenxa yesikweletu noma isikweletu esingahle sibe khona soMnyango noma okuvela kunoma yiziphi izimangalo zomonakalo. Esimweni esinjalo, Isevisi izokunikeza isaziso esibhaliwe salokho kumangalelwa, isimangalo noma isenzo.
Uyavuma ukuthi awusona isisebenzi seMicrosoft, The Coalition, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Electronic Arts, DICE, Reto-Moto, Rockstar, 2K Games, Activision, noma i-Offworld Industries, futhi awulona ilungu lomndeni noma ujwayelene kwalokhu okungenhla.
Uyavuma ukuthi awusona isisebenzi senkampani yabameli enenkontileka neMicrosoft, The Coalition, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Electronic Arts, DICE, Reto-Moto, Rockstar, 2K Games, Activision, noma i-Offworld Industries futhi awuyona ilungu lomndeni noma ojwayelene naye kule femu.
Uyavuma ukuthi awusona isisebenzi sanoma iyiphi inkampani ehlinzeka ngensizakalo yokulwisana nokukopela okubandakanya iPunkbuster, Valve, GameBlocks, Battleye noma i-EasyAntiCheat, futhi awulona ilungu lomndeni noma ujwayelene nalokhu okukhulunywe ngaye ngenhla.
Awusona isisebenzi sanoma yisiphi isitudiyo sokuthuthukisa umdlalo.
Awuthengi esizeni sethu nganoma yiziphi izinhloso zokuphenya.
Uyavuma ukungazenzi omunye umuntu.
Ungahle ungafinyeleli Isevisi, iwebhusayithi, izinkundla, noma isoftware Yesevisi uma ngabe eminye yale migomo engenhla isebenza kuwe.
Uma wephula noma iyiphi yale migomo engenhla uyavuma ukukhokha i-Gamepron $ 30,000 USD ngokungena ngakunye kwesoftware yethu nezithangami.
Igeyimu. ngeke neze ubekwe icala nganoma yimuphi umonakalo oqondile, ongaqondile, owehlukile, okhethekile, wokujezisa, noma owalandela wanoma yimuphi uhlobo, obangelwa okuqukethwe noma ukufinyelela kuwebhusayithi.
Okhiye beCD, okhiye beLayisense, okhiye bomkhiqizo_____________________________
Noma yimaphi ama-akhawunti wakho wegeyimu, ama-akhawunti aku-inthanethi, imidlalo, okhiye, nekhompyutha kungumthwalo wakho uqobo. Uma usebenzisa noma usebenzisa kabi isoftware yethu futhi uvinjelwa, kuthathwa njengesibopho sakho.
Uma uthenga isevisi yokubhalisile kusuka kuwebhusayithi yethu, okubhaliselwe kuzoqala lapho siqinisekisa inkokhelo yakho. Ukubhaliswa kuzoma ekupheleni kwesikhathi esithengiwe; Asikufaki ukubhaliswa ngaphansi kwanoma iliphi igama, ngaphandle uma sisho njalo. Uma uthenge okubhaliselwe okuqhubekayo okuvuselela njalo ekupheleni kwenyanga ungakukhansela lokhu ngekhasi lethu lesitolo ukuze ungakhokhiswa ngenyanga ezayo. Okubhaliselwe kunganikeza ilayisense elinganiselwe elinganiselwe lokusebenzisa isoftware efinyeleleka kuphela kubasebenzisi beqembu elithile labasebenzisi be-VIP, kepha lokhu kufinyelela kungaba ngaphansi kokuqedwa, isikhathi sokuphumula sokugcina noma ukuyeka. Kwezinye izimo isinxephezelo sizonikezwa. Izinkinobho zokwenza ilayisense yokubhalisa zizonikeza isikhathi esithile sabasebenzisi ukuthola ukufinyelela kwinsizakalo yesoftware esiyinikezayo.
Abasebenzisi akufanele babhalise ukhiye omusha kuze kuphele isikhathi sakho samanje sokubhaliselwe esisebenzayo. Izikhathi zesikhathi sokubhalisile azinqwabeli kodwa zizosebenza ngasikhathi sinye uma ukhiye ongaphezu kuka-1 ubhaliswe ku-akhawunti efanayo. Ngeke silungise / sengeze isikhathi sokubhaliselwe kuma-akhawunti wabasebenzisi ngaphansi kwanoma iziphi izimo uma wenza kusebenze ukhiye ongaphezu kuka-1 ngesikhathi sokuqalisa sokubhalisa.
Endabeni yekhasimende elifuna ukushintsha insizakalo, lizoba ngaphansi kwe-20-40 USD "imali yokushintsha" kanye nokwehluka kwentengo okufanele kukhokhwe. Ukushintshwa kokhiye AKUNIKELWA imvamisa futhi kuxhomeke kubaphathi bewebhusayithi ukuthi bakhethe kuziphi izimo lapho lokhu kungasetshenziswa khona. Ngakho-ke ikhasimende alinakulindela ukuthi lizokwazi ukushintsha izinsizakalo ngesikhathi salo sokubhalisa.
Ngemuva kokuthenga isoftware uzothola ukhiye, nethuba lokulanda isoftware, Uma usuthole / ubheke ukhiye akukho mali izobuyiselwa.
Ukudluliswa kokhiye kwabanye abantu kuvunyelwe, ngokwenza lokhu kepha isikhathi sizodonswa ngokuzenzakalela kukhiye wakho welayisense.
Kungumsebenzi wakho ukuhlola ukuthi umkhiqizo uyahambisana yini nekhompyutha yakho, Ie yonke imikhiqizo ye-intel isebenza kuphela nama-Intel CPU's ashiwo ngokusobala emakhasini womkhiqizo. Akukho mali ebuyiswayo ezokhishwa noma kungekho okhiye abasha beminye imikhiqizo abazonikezwa uma wenza leli phutha. Uma ngethuba singawulethi ukhiye futhi ubona lokhu sizokunikeza omunye umkhiqizo uma intengo iyefana noma ingaphansi kokukhokhelwayo.
Kungumsebenzi wakho ukuhlola isimo somkhiqizo, ngeke sikhiphe izimbuyiselo uma umkhiqizo ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma uvivinywa. Kuzofanele ulinde kuze kube yilapho umkhiqizo ubuya ku-inthanethi noma sizokunikeza omunye umkhiqizo uma intengo efanayo noma ishibhile.
Sinelungelo lokususa noma isiphi isici kunoma imiphi imikhiqizo nganoma yisiphi isikhathi. Lokhu sikwenza ngenxa yokukugcina uphephile emdlalweni. Sisebenza kanzima ukubuyisa izici kepha ngesikhathi sakho kungasuswa into eyodwa noma ezimbili. Sicela uthinte abosizo ngengxoxo ebukhoma ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini izici ezisusiwe ngaphambi kokuthenga kwakho, uma uthenga futhi ezinye izici zisuswa sinelungelo lokungabuyisi imali.
Sicela ubuze nge-livechat / ukwesekwa ukubona ukuthi umkhiqizo usesitokisini, uma ungekho esitokisini kungathatha izinsuku ezi-1-2 zebhizinisi ukuletha ezimweni ezingavamile, ukulethwa kokhiye kuvame ukwenziwa ngokushesha noma ngaphakathi kwamahora noma imizuzu embalwa .
Amanani, ukukhokha, ukubuyiselwa kwemali
I-akhawunti ye-Paypal, onelungelo lokuyisebenzisa, iyadingeka kunoma iyiphi i-akhawunti ekhokha noma ukhiye.
I-Mastercard, i-Visa, i-Amex noma ezinye izindlela zokukhokha onelungelo lokuzisebenzisa, ziyadingeka kunoma iyiphi i-akhawunti ekhokhelwayo noma ukhiye.
Uma ubhalisela i-akhawunti ekhokhayo, uzokhokhiswa njalo ngenyanga, ngekota noma ngonyaka ngokuya ngohlelo olukhethiwe, kusukela ngosuku owagunyaza ngalo ukubhalisa okuphindayo nge-Paypal noma nge-Mastercard, i-Visa, i-Amex noma enye inkokhelo.
Zonke izinkokhelo ezenziwa nge-Paypal ne-Mastercard, i-Visa, i-Amex noma enye indlela yokukhokha ingeyokubhaliswa okungokoqobo, okungabuyiswa esithangamini sethu. Ngemuva kokufinyelela isithangami sethu sangasese noma isoftware ebonakalayo, uthole inani eligcwele lokuthengile kwakho.
Njengoba konke ukuthenga kungokwokubhaliswa kweforamu ebonakalayo nesoftware ebonakalayo, ngeke kube khona izimbuyiselo ezamukelwe.
Izinkokhelo ozenzayo azibuyiswa futhi zikhokhiswa ngaphambi kwesikhathi. Ngeke kube khona ukubuyiselwa kwemali kwanoma yiluphi uhlobo noma izikweletu zesikhathi esizayo ngokusetshenziswa kwensizakalo izinyanga ezithile.
Lapho ufinyelela izinkundla zethu eziyimfihlo, noma ufinyelela isoftware yethu ebonakalayo edinga i-akhawunti ekhokhayo, uthole inani eligcwele lokubhalisile futhi ngeke ufanelekele ukubuyiselwa imali noma isikweletu.
Zonke izimali zikhokhiswa kunoma yiluphi uhlobo lwentela, amalevi noma intela ebekwe iziphathimandla zentela.
Isevisi ngeke ibe nesibopho sokulahleka kokuqukethwe noma izici noma ukungakwazi ukwenza imisebenzi ngenxa yokwehliselwa phansi kwe-akhawunti.
Ukuphela kwendlela yokukhansela noma ikuphi ukubhaliswa okuvela njalo kwi-Service kungo-Paypal noma nge-processor yethu yokukhokha.
Lapho kuphela ukubhalisa kwakho okukhokhelwe, i-akhawunti yakho izokwehliselwa ebulungwini bamahhala.
Isevisi inelungelo lokunqaba ukwenzelwa noma ngubani nganoma yisiphi isizathu nganoma yisiphi isikhathi.
Isevisi inelungelo lokunqamula i-akhawunti yakho. Lokhu kuzoholela ekuvinjweni noma ekususweni kwe-akhawunti yakho futhi uzovinjelwa ekufinyeleleni kule nsizakalo.
Ukwehluleka koMsebenzi ukusebenzisa noma ukuphoqelela noma yiliphi ilungelo noma ukuhlinzekwa kweMigomo Yesevisi ngeke kwenze kuchithwe lelo lungelo noma ukuhlinzekwa. Imigomo Yesevisi yakha sonke isivumelwano phakathi kwakho neNsizakalo futhi ilawula ukusebenzisa kwakho i-Service, ithatha isikhundla sezivumelwano zangaphambili phakathi kwakho ne-Service.
Isevisi inelungelo lokuvuselela nokuguqula imigomo yesevisi ngezikhathi ezithile ngaphandle kwesaziso. Noma yiziphi izinguquko noma izibuyekezo ezenziwe kuhlelo lokusebenza zingaphansi kwale Migomo Yesevisi. Ukuqhubeka nokusebenzisa insiza ngemuva kokwenziwa kwalezo zinguquko noma izibuyekezo kuzoba yimvume yakho kulezo zibuyekezo kanye / noma lezo zinguquko.
Kunoma ikuphi unombuzo maqondana nale migomo yesevisi, ungayithumela nge-imeyili ku [email protected]